Mhedzisiro pamusika wemasheya? Kwete, mune mari yekudyara | Ehupfumi Zvemari
Vanenge vese varairidzi vanoziva kuti migove ndiyo chikamu chemubatsiro wekambani iyo inosarudza kugovera pakati pevachagovana navo. Ndiyo wakatemwa uye unovimbiswa mubhadharo iyo inoenda kuaccount yako yekutarisa gore rega rega zvichibva panguva dzako dzekubhadhara. Ivo vanoonekwawo sechikamu chemari yakatarwa mukati meiyo musiyano, zvisinei nekuti mutengo wezvikamu zvavo unotaurwa sei. Uku ndiko kufarirwa kuti gore rega rega kune zviuru nezviuru zvevashambadzi vadiki nepakati vanosarudza iyi yakasarudzika nzira yekudyara. Kunyangwe kune vazhinji vaongorori yakanangidzirwa kunyanya mumaprofayiri evashambadzi vehunhu hwekudzivirira kana hwekuchengetedza.
Marozaniso, mune chero mamiriro ezvinhu, anobhadharwa nemari uye iko kuvhiya kunoitwa semi-gore, kunyangwe pazviitiko makambani akanyorwa angasarudza kubhadhara a bhonasi. Kusvikira makore mashoma apfuura zvaitaridzika kuti uyu mugove wevabati yaive nyaya yezvikamu pamusika wemasheya. Mune mamwe mazwi, kuitora, pakanga pasina sarudzo kunze kwekuenda kumisika yemasheya. Maitiro aya achinja nemufaro kuve nani sezvo chimwe chezvinhu zvakakurumbira zvakaita semari yekudyara yatora batoni kuribhadharira vamiririri vayo.
Parizvino, ingangoita 15% yeiyo Investment funds ipa chikamu ichi. Ivo havasi vanobva ku mari yakasiyana-siyana sevashandisi vazhinji vanogona kusvika pakutenda. Asi, pane kupesana, iyi nzira yemubhadharo yakawedzerwa kune yakatarwa-mari, mari, imwe mari mari, uye pakupedzisira, yechero chimiro kana kuumbwa. Nenguva dzakafanana dzekubhadhara sekutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya. Mune mamwe mazwi, gore rega, semi-gore, bimonthly kana quarterly, zvinoenderana nemhando yakasarudzwa. Nechipo chiri kuwedzera kubva kune akasiyana mamaneja maneja.
1 Dzoka pamari
2 Mari inobhadharwa sei?
3 Izvo hazvireve kuti ivo vari nani mari
4 Gadzira bhegi rekuchengetedza
5 Mamwe matipi nezve ako mabhadharo
Imwe mhosho yakaitwa nenhamba yakanaka yevarimi ndeyekupedzisa kuti zvikamu zvemari mutual hazvibatsiri pane izvo zvakagadzirwa mumusika wemasheya. Hongu kwete, uye zviripo pane nyaya inokatyamadza yekuti parizvino pane imwe mari iyo iri kutopa goho repamusoro rezvibereko pane iro kubva kumisika yemasheya. Kutenderedza 8% uye 9% uye anogoverwa ani anoenda zvachose kubhangi account yevashandisi, mushure mekucheka kwakakodzera kwemitero kunoitwa pamubhadharo uyu kune iye anogovana.
Kune rimwe divi, ichokwadi kuti kuenzana mari yekudyara mari inowanzo kuve nerupo zvakanyanya kupfuura iyo inotorwa kubva kune zvimwe zviwanikwa zvemari. Nedzimwe mutsauko dzinogona kusvika kana kunyangwe pfuura zvikamu zvishanu muzana. Chinhu chinonzwisisika kuti chinzwisiswe nevakawanda vane ruzivo vashoma nepakati varimi. Chimwe chinhu chinofanira kutariswa panguva ino ndechekuti kubhadhara uku hakuchisiri kushoma asi kunokanganisa zvizhinji zvezvinhu izvi zvemari. Ehezve, kupfuura zvaunogona kufunga pakutanga uye zvakaringana kuti iwe utarise iko ikozvino kupihwa kuti uone ichi chokwadi.
Mari inobhadharwa sei?
Kumwe kwekukahadzika kukuru kune vane mari kunoreva kuti uyu mubairo unounganidzwa sei. Huye, iwo masheya anofanira kutengwa pasati pasvika chikamu chemugovano. Sezvinei, pamwe nekutarisira sezvazvinoitikawo mumusika wemasheya. Iine purofiti yemahara inofamba mune isina kuenzana renji iyo inongori ye1% uye kunyange iri padhuze ne10%. Icho chiri chaizvo kurova chokwadi chekuti zvikamu zvemari yekudyara nhasi ndeimwe yeinobatsira kwazvo mumisika yemari. Chimwe chikonzero nei savha zhinji dziri kutendeukira kune ichi chigadzirwa chemari panguva ino.
Iyi mibairo ichaenda kune iyo account yevashandisi yazvino mukati menguva iyo haapfuuri mazuva manomwe negumi. Nekunonoka kwakati kurei pane mukutenga masheya, kunyangwe hazvo ichitongwa neyakafanana nzira. Iwe unongofanirwa kuenda kumafaira faira kuti uone kuti kubhadharwa kwezvikwereti kunogoneswa. Kunyangwe ruzivo urwu ruchizokwanisa kukuudza iwe kubva kubhangi rako rekare kuti uone kana richikukodzera kana kuti kwete kuenda kune ino yekudyara system. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye mune dzimwe nguva zvakare kubva kune yakakosha poindi yekutarisa.
Izvo hazvireve kuti ivo vari nani mari
Chero zvazvingava, chokwadi chekuti homwe yemari inogovera zvikwereti hairatidze kuti iri nani kana yakaipa kupfuura iyo isingasarudze zano iri maererano nemubhadharo. Zvakapesana kwazvo, zvinogona kuitika izvozvo dhisikaundi kubva pamutengo wako mumisika yemari. Uye mune dzimwe nguva, hapana mubvunzo kuti ivo vanogona kuve neyakaipa kwazvo shanduko semhedzisiro yekuumbwa kweiyo portfolio. Mupfungwa iyi, chidimbu cheyambiro kune varairidzi hachisi chekusarudza yavo yekudyidzana mari nekuda kwechinhu ichi. Asi zvinopesana, nedzimwe misiyano iyo inonyanya kukosha uye inotobatsira.
Kubva pachikamu ichi chekuongorora pamusoro pemigovano inopihwa nemari yekudyara, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti chikamu chikuru chemakambani manejimendi chakasarudzirawo nzira yekubhadhara iyi nechinangwa che kurudzira kutenga kwako kune vangangoita vatengi. Nekuti mukuita, kusagadzikana kwemanzwiro kunogadzirwa pane sarudzo ichaitwa nevanhu ava kubva zvino zvichienda mberi. Nekufungidzira kwemari idzi zvichienzaniswa nedzimwe dziripo mumisika. Iwo mukana wekuwana yakatarwa uye yakavimbiswa kufarira gore rega, zvisingaite kunze kwekusiiwa.
Gadzira bhegi rekuchengetedza
Kune rimwe divi, mamwe mabhenefiti akakosha erudzi urwu rwezvikamu uye izvo zvinotsigirwa nemipiro yatichakufumura pazasi uye inosiyana zvakanyanya kubva kune iyo inogadzirwa kuburikidza nekushanda pamusika wemasheya. Bhara zvishoma nekuti ivo vanogona kukubatsira iwe kuvaka yakagadzika yekuchengetedza bhengi kwemakore mashoma anotevera.
Iwe unobhadharisa a yakagadziriswa mugove gore rega nepo kuratidzwa kwako kuri pachena kushoma pane kweyezvimwe zvigadzirwa zvemari, senge izvo zvinobva mukushanda kwako mumisika yemari.
Unogona kuwana kuita kuri yakakura kupfuura iyo yakapihwa nemakambani akanyorwa muhomwe. Aya maitiro akave achibatanidza mumakore achangopfuura uye kuti iwe ungasaziva panguva yekuverenga chinyorwa ichi.
Une fund vavhimi Akasimba kwazvo mari yekudyara iyo inokuudza iwe kuti ndeipi mari yekudyara ine aya akakosha maitiro. Iwe uchafanirwa kuve nemoyo murefu zvishoma sezvo paine mari zhinji uye hauzove nesarudzo kunze kwekushandisa akateedzana mafirita kusvikira iwe pakupedzisira wasvika kune izvi zvigadzirwa.
Kazhinji, kuburitswa kwezvikamu mumari yekudyara kuri ne gore negore, asi kana iwe uchida kuti ive yega trimester, hauzove nedambudziko rakawandisa kuvabata. Chete kuti iwe uchafanirwa kushandisa yakawanda nguva mukutsva kwayo kunoenderana.
Icho chirongwa chinoshanda kwazvo chekuvandudza mari yekudyara mazwi marefu uye kwauchazochengetedzwa kupfuura kana iwe ukasarudza kutengwa chaiko kwemasheya mumisika yemasheya. Iwe unongofanirwa kuona kuti zviri nyore here kana kuti kwete kuti zvihaye ivo zvichienderana neprofile iwe yaunounza seavashambadzi vepakati nepadiki.
Mamwe matipi nezve ako mabhadharo
Kune rimwe divi, zviri nyore kwazvo kuti kana ukasarudza iyi investa iwe unotarisa zvimwe zvakasarudzika murudzi urwu rwekudyara, saka rwekutanga uye ruzivo panguva imwe chete. Chekutanga pane zvese zvichave zvakakosha kuti iwe uve nazvo mazita mazhinji akatengwa kana iwe uchida kuti mubhadharo uve wakakodzera chaizvo. Kwete pasina, nemipiro midiki pachave nemari shoma kwazvo ichaenda kuaccount yako account. Zvimwe kana zvishoma sezvazvinoitika nemakambani akanyorwa pamisika yemari.
Mune imwe nzira yezvinhu zvakakosha kuti usarudze asset manejimendi inivhesitimendi fund kuitira kuti iwe ugone kuchinjika kune ese zvinoitika mumisika yemari. Kunyanya mune isingafadzi iyo iwe yaunogona kurasikirwa yakawanda ma euro munzira. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti shanduko kumashure inogona kugadzirisa dambudziko nekunyatsoita basa, kupfuura nzira dzekudyara dzauinadzo panguva iyoyo. Nekuda kwezvairi pamusoro pekupera kwezuva kukwidziridza nzvimbo dzako uye kana vakakubhadharira chikamu chakatarwa gore rega, zviri nani hazvigoneke.
Chekupedzisira, imwe yekiyi yekugadzirisa mashandiro mukirasi ino yezvigadzirwa zvemari iri mukusarudza iyo inobatsira kwazvo mari yekudyara mumakore apfuura. Kana zvirinani ivo vanofambidzana nemaitiro emisika yemari, chero chinhu chaunosarudza panguva iyoyo. Nekuti hazvireve hazvo kuti zvinofanirwa kunge zvichibva kumari, asi unogona kusarudza zvimwe zvinhu zvakasiyana. Ndiyo imwe yekiyi yekubudirira mukudyara kuburikidza nemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mhedzisiro pamusika wemasheya? Kwete, mune mari yekudyara